Nhọrọ ise kachasị mma maka Spotify maka gam akporo | Androidsis
Nhọrọ Nhọrọ Spotify ise maka gam akporo
Edere Ferreno | | Ngwa gam akporo, gụgharia
Spotify bụ ngwa nkwanye egwu kacha mma n'etiti ndị ọrụ na android. Ngwa anyị nwere ike ịnweta na -akwụghị ụgwọ, ekele maka ụdị ya nwere mgbasa ozi yana yana ụdị adịchaghị mma. Agbanyeghị na ọ bụ ngwa ama ama, yana nnukwu katalọgụ egwu dị, enwere ndị ọrụ na -achọ ihe ọzọ na Spotify maka gam akporo.
Ọ bụrụ na ọ bụ nke gị, ọ bụrụ na ị na -achọ ihe ọzọ na Spotify maka gam akporo, anyị na -ahapụrụ gị n'okpuru ngwa kacha mma ị nwere ike ibudata na ekwentị gị. Ekele dịrị ha ị ga-enwe ike nweta otu ọrụ nke ngwa nkwanye ugwu Sweden ama ama na-enye anyị wee si otú a na-anụ ụtọ egwu na ekwentị gị n'ụzọ dị mfe.
Akụkụ ngwa gụgharia egwu Ọ nwere ọtụtụ aha ama ama, yabụ anyị na-achọta nhọrọ na-atọ ụtọ na nke a. Ma ọ bụrụ na anyị na -achọ ngwa nwere katalọgụ egwu sara mbara ma ọ bụ anyị chọrọ nke ga -enye anyị ụda kacha mma mgbe anyị na -ege egwu, ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị nwere mmasị ịnweta ụfọdụ ọrụ nke, dịka ọmụmaatụ, anyị anọghị na ya. Spotify dị ugbu a.
Na Storelọ Ahịa Play anyị na -ahụ ọtụtụ ngwa dị na mpaghara a, yabụ na a ga -enwe ihe dabara anyị na ihe anyị chọrọ na nke a. Ọ bụrụ na ị na -achọ ihe ọzọ na Spotify maka gam akporo, ndị a bụ ngwa ise kacha mma anyị nwere ike ibudata ugbu a.
2 Egwu Amazon (yana egwu Amazon na -akparaghị ókè)
3 Egwuregwu Apple
Deezer bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma maka Spotify na anyị nwere ike ibudata ugbu a na gam akporo. Ngwa a nwere katalọgụ egwu sara mbara, nke yiri nke ngwa nkwanye ugwu Sweden (ihe karịrị nde 70). Na mgbakwunye, anyị na -ahụkwa nhọrọ pọdkastị dị na ya, ebe ọ bụ na nke a bụ ihe na -amasịkwa anyị n'ọtụtụ ọnọdụ. Ngwa a pụtara maka inye anyị ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ na -atọ ụtọ dị ka sistemụ nke ya iji mata egwu a na -akpọ SongCatcher. Ọrụ a dabere na Shazam ma bụrụ ụzọ ịmara aha egwu ọ bụla na -egwu ugbu a na ngwa.
Ngwa a na -enye anyị otu ọrụ ndị anyị marala na Spotify, yana interface dị mma iji. Anyị nwekwara ohere nke kpọọ egwu na -enweghị njikọ ịntanetị, otu n'ime ọrụ ndị kacha amasị ndị ọrụ gam akporo. Anyị nwere ike ịmepụta listi ọkpụkpọ nke anyị n'ime ya, hụkwa egwu egwu anyị na -ege na enyo mkpanaka.
Enwere ike ibudata Deezer n'efu na ekwentị gam akporo anyị site na Storelọ Ahịa Google Play. Dị ka Spotify, nwere atụmatụ na -enye anyị ohere iji ya n'efu yana mgbasa ozi n'ime, n'etiti egwu. Na mgbakwunye, enwere atụmatụ ịkwụ ụgwọ abụọ: atụmatụ adịchaghị ọnụ nke na -efu euro 9,99 kwa ọnwa yana atụmatụ ezinụlọ, nke na -enye ohere ruo akaụntụ isii ma na -akwụ euro 14,99 kwa ọnwa. Ị nwere ike budata ngwa site na njikọ a:
Deezer - Egwu na Pọdkastị
Developer: Egwu Deezer
Egwu Amazon (yana egwu Amazon na -akparaghị ókè)
Ngwa gụgharia egwu ọzọ ama ama, nke ewepụtara dị ka ihe ọzọ dị mma maka Spotify na gam akporo. Ngwa a na -enwe ezigbo ọganiihu n'ahịa ma nwee katalọgụ egwu na -abawanye. Ọzọkwa, enwere oge mgbe ụfọdụ ndị na -ese ihe na -ahapụ egwu ha naanị na ngwa a. Ọ bụ ngwa agụnyere na ndenye aha Amazon Prime gị, yabụ ọ bụrụ na ị nwere otu, ị ga -enwe ike ịnụ ụtọ ya oge niile na -akwụghị ego ọzọ.
N'okwu a, anyị na -ekwu maka ngwa abụọ, ebe ọ bụ na n'otu aka anyị nwere egwu Amazon nke bụ nke etinyere na Prime, mana o nwere egwu ole na ole. N'aka nke ọzọ anyị na -ahụ Amazon Music Unlimited, nke nwere katalọgụ egwu sara mbara nke ukwuu, yana egwu karịrị nde 70 dị. Nke a bụ ngwa etinyeghị na Amazon Prime, mana anyị ga -akwụ euro 9,99 kwa ọnwa iji jiri ya, mana ọ ga -enye anyị ọtụtụ nhọrọ, yana ịnweta nnukwu egwu. Na mgbakwunye na egwu, anyị nwekwara ezigbo nhọrọ pọdkastị dị, ụfọdụ n'ime ha bụ naanị maka ngwa, yabụ nke ahụ bụ akụkụ ọzọ iburu n'uche.
Maka ndị ọrụ na -achọghị ụdị katalọgụ dị otú ahụ, Amazon Music nwere ike rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụ ezie na kpakpando na nke a, nke bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma maka Spotify na gam akporo, bụ Music Unlimited. Ụlọ ọrụ na -emekarị nkwalite ka anyị wee nwee ike nweta ohere n'efu ruo ọtụtụ ọnwa ma ọ bụ kwụọ ụgwọ dị obere kwa ọnwa maka ndebanye aha gị, dịka ọmụmaatụ. Yabụ na ọ bụ ezigbo nhọrọ iburu n'uche wee nwee ike nwalee ya, ịhụ ma ọ bụ nnọchi maka Spotify ka anyị na -achọ n'okwu anyị.
Egwu Amazon: Gee Pọdkastị
Egwu Apple bụ ngwa nkwanye egwu Apple, nke anyị nwekwara ike ibudata na ekwentị gam akporo anyị bụ ihe ọzọ dị na Spotify nke anyị ga -eburu n'uche. Ọ bụ ngwa nwere nnukwu katalọgụ egwu karịrị egwu 60 nde, nwere ọtụtụ aha ewepụtara naanị na ngwa ahụ, nke ị gaghị enwe ike ige ntị na nke ọzọ. Yabụ na ọ bụ ezigbo nhọrọ iburu n'uche ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịnweta egwu ma ọ bụ diski emepụtara maka ngwa a.
Ngwa ga- kwe ka ịchekwaa ndekọ na egwu na -amasị anyị, yana imepụta listi ọkpụkpọ nke anyị. Na mgbakwunye, anyị nwere ike inyocha ụlọ ọrụ redio ma ọ bụ chọpụta pọdkastị n'ime ya ma ọ bụ obere akwụkwọ akụkọ gbasara ndị na -ese ihe na -amasị anyị. Anyị nwekwara ike ịhụ nke bụ abụ kacha ewu ewu n'oge a na listi ọkpụkpọ dị iche iche nke ngwa n'onwe ya mepụtara. N'ime ọrụ ya, anyị ga -egwu egwu na -enweghị njikọ Internetntanetị.
Egwu Apple bụ otu n'ime ndị ọzọ na Spotify nke nwere naanị ndebanye aha akwụ ụgwọ. Ọ nwere atụmatụ ndenye aha nke na -efu euro 9,99 kwa ọnwa (euro 4,99 n'ihe gbasara ịbụ ụmụ akwụkwọ), yana atụmatụ ezinụlọ maka ihe ruru mmadụ isii na -efu euro 14,99 kwa ọnwa. Na ihu ọma, enwere oge nnwale efu na ngwa (ọ na -abụkarị otu ọnwa), yabụ ị nwere ike chọpụta ma ọ bụ ihe ị na -achọ. Ị nwere ike ibudata ya na Play Store n'okpuru:
Maka ndị ahụ na -achọ ngwa ebe ogo dị mma bụ ihe dị oke mkpa, Tidal bụ ngwa ị na -achọ. Ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị adịchaghị maka Spotify maka gam akporo anyị nwere ike ịchọta. Ọ bụ ngwa nke ọtụtụ ndị na-ese ihe ama ama (Jay-Z, Beyoncé, Rihanna….)
N'ime ngwa anyị na -ahụ katalọgụ nke egwu karịrị nde 70. Na mgbakwunye, anyị nwere ọrụ dịka ịkpọ egwu na -enweghị njikọ Internetntanetị ma ọ bụ nwee ike ịgbanwe egwu n'ụzọ enweghị oke. Agbanyeghị na ọrụ niile anyị nwere na ngwa a na -akwụ ụgwọ. Na mgbakwunye na egwu, anyị na -ahụ ihe karịrị vidiyo 250.000 dị n'ime ngwa ahụ. Banyere ụda ahụ, anyị nwere ụda nkọwa dị elu oge niile, yana HiFi dịkwa.
A na -akwụ ụgwọ ụdị Tidal nkịtị na euro 9,99 kwa ọnwa, ebe ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ ogo HiFi na egwu, ọnụ ahịa ya bụ euro 19,99 kwa ọnwa. Ọ bụghị ngwa kachasị ewu ewu na mpaghara a, n'ihi na ọ dị oke ọnụ, mana ọ bụ otu n'ime ụzọ ọzọ zuru oke maka Spotify nke anyị na -achọta ugbu a.
TIDAL - Egwu gụgharia
Pandora bụ ihe ọzọ ama ama na Spotify maka gam akporo maka ndị ọrụ. Ọ bụ ngwa yiri Spotify n'ihe gbasara ọrụ, yabụ na ọ bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na -achọ ihe yiri ya. Ngwa a pụtara maka inwe katalọgụ egwu na pọdkastị nke sara mbara, yabụ ị ga -enwe ike ige egwu kachasị amasị gị n'ime ya. Na mgbakwunye, ọ na -enye anyị ụdị ọrụ ahụ maka ndị anyị marala na ngwa nkwanye Sweden.
Anyị ga -enwe ike itinye egwu na listi ọkpụkpọ anyị na nkasi obi zuru oke, yana kpọọ egwu na -enweghị njikọ ịntanetị. Na mgbakwunye, ngwa ahụ nwere nkwado maka iwu olu, nke mere na ọ ga -ekwe omume kwụsịtụ egwu, wụ egwu ma ọ bụ malitegharịa ọkpụkpọ naanị site na iji iwu olu. Nke a bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na -enye aka na iji ngwa dị mfe karịa mgbe niile na ekwentị gam akporo anyị.
Dị ka ngwa ndị ọzọ dị na ndepụta a, Pandora nwere naanị ndenye aha akwụ ụgwọ. Ụdị ngwa a na -akwụkarị nwere ọnụ ahịa euro 4,99 kwa ọnwa ma ọ bụ euro 54,98 ma ọ bụrụ na anyị ahọrọ ịkwụ ụgwọ maka afọ ahụ niile n'otu ịkwụ ụgwọ. Pandora Premium nwere ọnụ ahịa euro 9,99 kwa ọnwa ma ọ bụ euro 108,89 kwa afọ ma ọ bụrụ na akwụ ya n'otu ugwo. Ngwa a nwekwara ego maka ụmụ akwụkwọ ma ọ bụ atụmatụ ezinụlọ, yabụ ị nwere ike nweta ya dị ọnụ ala.
Ahụghị ngwa ahụ n'ụlọ ahịa. 🙁
Gaa na ụlọ ahịa Google web search
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Nhọrọ Nhọrọ Spotify ise maka gam akporo
eme Ọnwa 3
Anyị nwere ike iji egwu YouTube mgbe niile, agbakwunyere, site na Google, yana na enweghị ndebanye aha, katalọgụ kacha mma, nke na -akwụ ndị na -ese ihe ego ...
Mana echere m na na gam akporo ọ ka mma ịkwado onye sitere na Apple ...
Realme 8i: nzọ ọhụrụ maka etiti nwere ezigbo atụmatụ
Ebe ị ga -elele oge niile nke South Park na Spanish